Musharax Odowaa “Anniga Ma Rabo inuu Farmaajo iga dhigo Gudoomiye Gobol” | Kalshaale Warar Sugan iyo Suugaan
Musharax Odowaa “Anniga Ma Rabo inuu Farmaajo iga dhigo Gudoomiye Gobol”
Oct 9, 2019 - 2 Aragtiyood
Muqdisho ( Kalshaale ) Musharaxa Madaxweynaha maamul Goboleedka Galmudug C/raxmaan Maxamed Xuseen (Odawaa) ayaa sheegay in Soomaaliya ay ka soo gudubtay waqtigii la soo magacaabi jiray Guddoomiye Gobol.
Dadkiiba uqdad ayay wada qaadeen kkkkkkkkkkkkkkkkk
Aduunka madaxda hal wadan way isku baahan yhiinkkkk
Iyagu iskuma baahna laakiin shaqada wadanka loo hayo ayaa isku xidha madaxda uu wadan leeyahay.
Dadkani Somaliyeed Hogaamintiiba wax u fahmeen in lays jikaaro.
Ninkaan xildhibaan Odawaa, inkasta oo marar badan faltered, uu qalad ku dhacay [mararka uu la’is istaago daanyeer Ahmed Macalin Fiqi, Abdriahmaan Abdishakuur, iyo oday Xaaf] hadanna, marwalba waa uu isa soo qabanayay, oo isa saxayay.
Hadeer waa markale oo uu kufay, kadib markii uu tagay hal jeer kabadan Dhuusamareen, oo ah meel lagu karkarinaya wax aanan dan u aheeyn Galmudug, amaba Somaliya guud ahaan, iyo dowladnimo Somaliyeed. Waxa Dhuusamareen lagu hayo ee lagu abaalmarinayo balanqaadyo been ah suufiyada ah kuwii isbaarada u dhigtay maamulka Galmudug waa qalad in qeeyb laga noqda.
Sidaas darteed, xildhibaan Odawaa waa daanyeer markii uu tagay Dhuusamareen, isaga oo og in beeshiisa oo qalad weeyn iyo balan kabaxyo badan eey kusameeysay Dowladda dhexe. Marka, taas waxeey tilmaameeysaa in uusan ninkaan daanyeerka ee xildhibaan Odawaa uusan danta qabiilkiisa waddin, danna ka laheeyn. Nin aanan dan ka laheeyn qabiilkisia, oo ah waxa Somaliya isku heeysatana, dan kama lahaan karro qabiilo kale.
Therefore, daanyeerkaan waxa uu u hadlyaaa, u ordayaa waa danno shaqsi. Marka, dadka caqliga leh ee beesha uu sheegto in uu kasoo jeedo, iyo Somalida nadiifka ah, waa in eeysan taageerin, soona dhaweeyn daanyeerkaan u ordaya danno shaqsi. Waxa uu Dhuusamareen u tagay waa isaga oo calcaluation, xisaab daanyeernimo ah sameeyay, oo ah in maadaama dambi, iyo qaladaad badan oo ula kac ah lagu sameeyay beesha Saleebaan, lagu qancinayo in qof aanan iyaga aheeyn uusan hogaamin doonin dowladda beenta ah oo loo dhisayo Galmudug, fikirkaasna waa daanyeernimo. Sidaas owgeed, ayuu is dhahay fursad ayaad heeysataa. Daanyeer.